वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : December 2009
वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ December 30, 2009
चाडबाडको याम छ यहाँ। यसैले स्वाभाविक हो, यी चिसा दिनहरुमा पनि मस्ती र अलमस्ती भरिएको देखिन्छ, हावाले मादकता बोकेको देखिन्छ।
यसरी चाडबाडको यामले यी बस्तीहरु छोपिँदा घर र नेपालको याद आउँछ। अर्कोतिर, चाडबाडको यामले नेपाल छोपिँदा पनि नेपालको यादले पुरिन्छु म। यसरी वर्षको धेरै समय उदास हुने मेलो बन्छन्, दुईतिरका चाडबाडका यामहरु।
मेरो यो उदासी, मैले मनमनै कहिले रुँदै-कहिले हाँस्दै सम्झने नेपाल, देश बाहिर बसिरहेका लाखौं नेपालीहरुको साझा भावना हो।
देशबाहिर केहि वर्ष बस्नुमा म बाध्यतामात्रैलाई दोष दिन सक्दिन, अझ बाध्यताको अंश एकदम कम छ भनेपनि हुन्छ। म मेरो महत्वाकांक्षाले घिसारिएर परदेशिएको हुँ, यसमा अरु कुरा थपथाप भएका मात्रै हुन्। महत्वाकांक्षालाई ‘बाध्यता’ नामको खोल ओढाएर किन आफैंलाई ढाटौँ म? यसैले मैले ‘रोईरहनु’मा कुनै तुक भने देख्दिन म। मेरो पूर्ण ‘मानसिक’ भलाई चाँडै नेपाल फर्कनुमानै हुनेछ, जिन्दगीमा अरुखाले समस्याहरु थपिएलान् त्यो बेग्लै कुरा हो।
यो याम डिसेम्बर लाग्दैबाट शुरु भएको माने हुन्छ; मैले अलिक पहिला कुरा गरेको थिएँ बो-नेन-काइको, हो त्यहि बो-नेन-काइको हल्ला-खल्लाबाट। त्यसपछि क्रिशमश। जापानीहरु क्रिशमस मनाऊँछन् र जापानीहरु क्रिशमश मनाऊँदैनन्। क्रिशमस मनाऊँछन् यसकारण कि उनीहरु क्रिशमसको मनोरञ्जन (भौतिक/ब्यापारिक) पक्षहरु सबै पछ्याऊँछन्; मनाऊँदैनन् यसकारण कि क्रिशमसको धार्मिक पक्ष भने त्यति देखिँदैन उनीहरुको क्रिशमस उत्सवमा। अर्को शब्दमा भन्दा जापानको क्रिशमसमा सान्ता क्लज आऊँछन, जिसस क्राईष्ट भने आऊँदैनन्। क्रिशमश धर्म अँगालेका थोरै प्रतिशत जापानीहरुको कुरो होईन यो, बाँकी ‘गैर-क्रिश्चियन' जापानीहरुको हो। हुनत, जापानमात्रै किन, सबै ठाऊँहरु, हाम्रो समाज, पनि यस्तै-यस्तै हुँदै गईरहेका छन्। क्रिश्चियन समाजहरुको सम्पन्नता, उनीहरुका सञ्चार-माध्यमहरुको शक्ति र एक हदसम्म विगत केहि शताब्दीदेखि निरन्तर विश्वभाषाको रुपमा उपस्थित अंग्रेजी भाषाको प्रभावका कारण हुनुपर्छ यो।
पोहरबाट क्रिशमशको औपचारिकता अलि-अलि पूरा गर्नुपर्ने ‘बाध्यता’मा प-यौं हामीपनि। किण्डरगार्टेनमा क्रिशमशको कुरा सुनेर आएपछि आर्याले घरमा पनि कुरा गर्न थाली। यसैले उसका लागि केहि उपहारहरु ल्याईदिन सान्ता हजूरबालाई अनूरोध गर्नैप-यो:) यसपालि त एउटा सानो हरियो क्रिशमश ट्री (प्लाष्टिकको) र केहि झिलिमिली बत्तीहरुको समेत ब्यबश्था गर्नुप-यो। सान्ता हजूरबाले पनि राती आएर एक पोका उपहार त्यहि रुखमुनि राखेर हिँडेछन्:)
जापानको यो　यामको अर्को एउटा चलन ‘ओ-सोउजी’ (ठूलो सरसफाई?) हो। सामान्यतया नयाँ वर्षको बिदा शुरु हुने अघिल्लो दिन आफ्नो कार्यस्थलमा सबै मिलेर गरिने सर-सफाईलाई ‘ओ-सोउजी’ भनिन्छ, मेरो अड्डामा हिजो थियो। मेरो विचारमा वर्षान्तमा यस्तो सर-सफाई गर्ने चलन सबैतिर हुन्छ। जापानमा यस्ता औपचारिकता, गतिबिधि आदिलाई अलिक गम्भिरतापूर्वक, अलिक दार्शनिक दृष्टिकोण (philosophical approach) का साथ सम्पन्न गरिन्छ, फरक भए त्यसमै होला।
जापानी भाषाका यस्ता ‘ओ-सोउजी’ जस्ता शब्दको भावानुवाद गर्न सकिन्छ तर ठ्याक्कै मिल्ने नेपाली शब्द खोज्न गाह्रो लाग्छ मलाई। मेरो सीमित नेपाली शब्द-भण्डार, त्यसमा पनि केहि वर्ष बानी परेपछि यस्ता शब्दहरु यतैका बढी आऊँदारहेछन्, मनमा-मुखमा। बो-नेन-काइसम्बन्धी टाँसो बारेमा प्रतिकृया दिँदै (फेसबुकमा) साथी गोविन्द रिजालजीले बो-नेन-काइसंग ठ्याक्कै मिल्ने नेपाली शब्द ‘मैजारो’ हो भन्नुभएको थियो। ‘ओ-सोउजी’ संग ठ्याक्कै मिल्ने शब्द पनि होला, तपाईँलाई थाहा भए जान्न पाउने आशा छ।
हस् त यहि कुराकानीका साथ आजलाई बिदा पाऊँ।
तपाईँहरु सबैलाई नववर्ष २०१० को हार्दिक मंगलमय शुभकामना!
************************************************ सिकारु ब्रो, टाउकोमा पट्टी बाँधेर आईरहेका थिए।
(Physicist, Engineer, Chemist) *******************************************************
जापानमा डिसेम्बर महिना 'बो-नेन-काइ'को महिना भने पनि हुन्छ। बोनेनकाइ (忘年会) लाई सोझो शाब्दिक अर्थ लगाऊँदा "वर्ष बिर्सने पार्टी" भन्ने हुन्छ। अर्थ पनि त्यहि हो:) संगै काम गर्नेहरु, मिल्ने साथीहरु, संगै पढ्नेहरु भेला भएर बितेको वर्षका समस्याहरु, दु:ख र असफलताहरुलाई भुलेर रमाईलो गर्दै वर्षलाई बिदा गर्ने हो। त्यो रमाईलो भनेको मूलत: बेस्करी खाने र पिउनेनै हो:) नयाँ वर्ष शुरु भएपछि 'सिन-नेन-काई' (नयाँ वर्षको पार्टी) हरु पनि आयोजित हुन्छन्, यसैगरी रमाईलो गर्दै उज्यालो र आशावादी मनले नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न। मेरो अनुभवले के बताऊँछ भने बो-नेन-काइ जस्तो धेरै सिन-नेन-काइ आयोजित हुँदैनन् र आयोजना भए नै पनि बो-नेन-काइमा जति उत्साह र लगन हुन्छ त्यो सिन-नेन-काइमा भेटिन्न। म गलत पनि हुनसक्छु, जापानवासी अरु साथीहरुले पनि आफ्नो अनुभव बताउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। डिसेम्बर ५ मा अड्डा (कम्पनी)को कार्यक्रम थियो। यो 'बो-नेन-काइ' थिएन, अड्डाको वार्षिक आन्तरिक सम्मेलन थियो। कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक कार्यक्रम यहि हो। कम्पनीको वर्षभरिको उपलब्धिको समीक्षा, बिभिन्न बिभागका गतिबिधिहरुबारेको प्रस्तुति र उत्कृष्टलाई पुरस्कार, यो एक वर्षभित्रका कम्पनीका नवप्रवेशीहरुको परिचय, समूहगत छलफल आदि गरेर दिन बित्छ। त्यसकारण एक हिसाबले यो पनि बो-नेन-काइनै हो। साँझ परेपछि भने 'साँच्चैको' बो-नेन-काइको रुप लिन्छ यसले; उहि क्या भुँडी फुट्ने गरी खाने र पिउने:)
कोन्दोऊको बिहे पोहरको कुरा
अड्डाका माथिदेखि तलसम्मका धेरैजसो सबै कुनै एउटा न एउटा टूरमा सम्मिलित हुन्छन। परार, पोहर यस्ता टूरमा जाने मेसो मिलेको थिएन। यसपालि भएका एक दिने टूरहरुमध्ये एउटामा नागोया नजिकैको सानो टापू शिनोजिमा लगिने कार्यक्रम थियो, त्यहि रोजें मैले पनि सपरिवार जाने गरी।
जापानका यस्ता स-साना टापूहरुको हालत बिग्रिन थालेको धेरै भईसकेको रहेछ। घट्दो जनसंख्या र त्यसमा पनि युवाहरुको मूलभूमितिरको पलायनले गर्दा बिस्तारै रित्तिँदैछन् यी टापूहरु। छ किलोमिटरको परिधिमा उभिएको शिनोजिमाको जनसंख्या घटेर २००० जतिमा पुगिसकेछ। घट्दो जनसंख्यासंगै ब्यापारिक/आर्थिक गतिबिधि पनि घट्नेनै भए। यहाँको एउटै हाईस्कूल पनि बन्द भईसकेछ र विद्यार्थीहरु मूलभूमिका हाईस्कूलमा जाँदा रहेछन्। होटलमा खाना खाँदा कामदारहरु सबै ६० कटिसकेकाजस्ता लाग्थे। समुद्र किनारसंगै जोडिएको शिनोजिमाको सुनसान सडकमा हिँड्दा बिस्तारै जीर्ण हुँदै गईरहेका गेष्टहाउसहरु, रेष्टुरेण्टहरु र फर्निचर आदिका पसलहरु थुप्रै देखिन्थे। यो टापू शहरको भित्री भागमा पस्ने र यहाँका बिशिष्ट बौद्ध मन्दिरहरु हेर्ने रहर भने मनको मनमै रह्यो। गर्मीयाममा मेसो मिले एकचोटि जाने बिचार छ।
नेपालीमा एउटा Politically incorrect उखान छ; "लूटको धन, फुपुको श्राद्ध" भन्ने (आईमाई भएकै कारण फुपुलाई हेपिएको हो, नत्र फुपु र काका-ठूलाबामा केहि फरक छैन।)। यसलाई अलि मिलाएर "अपुतालीको धन, सात पुस्ताको श्राद्ध" बनाउने अनुमति चाहन्छु। "अपुतालीको धन, सात पुस्ताको श्राद्ध" अहिलेको माकुने सरकारलाई सबैभन्दा सुहाउने विशेषण र यसको समग्र मूल्यांकन हो। दिल्ली, न्यू योर्क आदि पछि यस्तै सात पुस्ते श्राद्धहरुको अर्को चरण पूरा गर्न अहिले माकुने जम्बो-टोली लिएर कोपनहेगन पुगेका छन्। प्रधानमन्त्रीले जम्मा तीन मिनेट मात्र सम्बोधन गर्न पाउने 'जलवायु सम्मेलन' मा नेपालका धेरै भ्रष्ट नेता र कर्मचारीले देशको धनको श्राद्ध खाएर डकारेर र पाधेर 'वायु' फाल्न पाउने भए। मन्त्रीपरिषद सचिवालयकै एक वरिष्ठ अधिकारीले प्रम र पाँचजना सरकारी अधिकारी बाहेक अरुको काम छैन भनेर सल्लाह दिँदा-दिँदै पनि पाँच दर्जनभन्दा बढीको जन्ती लिएर कोपनहेगनमा के गर्ने हो कुन्नि? नेपालमा जस्तो नारा-जुलुश गर्न र टायर बाल्न त पाईन्न होला त्यहाँ! थुक्क माकुने सरकार!
हातका चुरा बजाएर माकुने सरकारलाई हल्लाउने सुजाता र करीमा अनि माकुने सरकारबाट 'राजकीय' सम्मान पाउने ऋषि धमलाका कुरा त मलाईभन्दा बढी तपाईँलाईनै थाहा होला:) संविधान सभाको चुनावले के देखाईसकेको छ भने एमालेसंग टेक्ने भुईँ र समाउने हाँगा एकदम कम बाँकी छ। माओवादीसंग नयाँ राजनीतिक शक्ति हुनुको लहर छ, मान्छेहरुमा उसप्रतिको आकर्षण अझै कम भईसकेको छैन। अर्कोतिर, कांग्रेसको आफ्नो बर्गीय आधार त्यति भत्किसकेको छैन। त्यसैले एमाले जति कुबुद्धिग्रस्त र गोल्खाडी हुँदै जान्छ, त्यति यसलाई छोडेर एकथरी माओवादीतिर लाग्नेछन्, अर्कोथरी कांग्रेसतिर। एमाले सरकार सुशाशनभन्दा पनि यस्ता सातपुस्ते श्राद्धहरुमै रमाईरहेको देख्दा एउटा कुरा ठोकेर भन्ने स्थितिमा आईपुगेको छु म, आफूलाई जम्बोजेट ठान्ने एमालेलाई संविधान-सभाको चुनावले तीस सिटे मिनिबस बनाईदियो, अबको चुनावमा यो चार सिटे ट्याक्सी बन्नेछ।
थाहा छैन किन हो, यो गीत सम्झेपछि मलाई एउटा अत्यासलाग्दो उदासी र बेचैनीले घेर्न थाल्यो र मेरा आँखाहरु डिलसम्मै भरिन थाले। मेरा जनम-जनमका पिडाबोध र उदासी खप्टिएर अचानक एकमुष्ठ ममा पसेजस्तो! र मैले यो गीत खोज्न थालें गुगलमा, तर एम रानाजीको Imeem मा बाहेक अन्त भेट्न सकिन। धन्यबाद एम रानाजीलाई!
अचेल घरमा यो गीत धेरै-धेरै बज्न थालेको छ र मेरा आँखाहरु झन्-झन् भरिन थालेका छन्। लाग्छ, एक दिन यो गीत सुन्दै म डाँको छोडेर रुनेछु धेरै बेरसम्म। धेरै कुरा आफूले चाहेर पनि गर्न नसक्दाको नीरिहतामाथि, कति कुरा गर्न सक्ने हुँदा-हुँदै पनि नगर्दाको पश्चात्तापमाथि र धेरै-धेरै आफ्ना विवशताहरुमाथि!